शरीरमा नसा नभेटिएर डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेन - Everest Dainik - News from Nepal
शरीरमा नसा नभेटिएर डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेन
इलाम, पुस २९ । पाँच दिनदेखि आफ्नो सोह्रौं अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा सुधार लगायतका ६ वटा माग राखी गत बुधबारदेखि अनशनमा बसेका केसीको रगत तथा पिसाब परीक्षण गर्न सकिएको छैन।
डा. केसीका सहयोगी डा. रामकृष्ण आचार्यले केसीको शरीरमा नसा नभेटिँदा रक्त परीक्षण गर्न नसकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पिसाब नआउँदा पिसाबको परीक्षण पनि गर्न सकिएको छैन।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी गत बुधबारदेखि इलाम नगरपालिकाको फूलगाछीमा सोह्रौं पटक अनशन बसेका हुन्। यसअघि भएको सम्झौता विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि उनले त्यसलाई अनसनको मूल मुद्दा बनाएका छन्।
केसीले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई बर्खास्ती लगायतका कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ।
थपियो केसीको माग
सधैँ मेडिकल शिक्षा र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई आफ्नो माग बनाइराख्ने डा. केसीले यस बाहेक अन्य दुई माग पनि राखेका छन्। कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको विषयलाई उनले उठाएका छन्। निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन उनले माग राखेका छन्।
२७ दिनसम्म चलेको डा. गोविन्द केसीको १५ औँ अनशन २०७५ साउन १० गते सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि तोडिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
ट्याग्स: dr kc, Dr KC Ilam